China 5 izingqimba A2 Cutting Mat, 661A2, Self healing Cutting mat Manufacture and Factory | U-Allwin
5 izingqimba A2 Cutting Mat, 661A2, Self ukuphulukisa Cutting mat
Sukuphulukiswa kwe-elf A2 ukusika ifektri mat ngqo
Ithebhu yokusika yokuziphilisa, vikela indawo yakho yokusebenza yetafula, Ubuso bomata bekuyi-PVC ethambile, ungalimazi i-cutter blade, ama-Blade aqine kakhulu.Ungasebenzisa lo makhi njengesivikeli sedeskithophu noma ibhodi lokusika le-DIY egumbini lakho, ikhaya, isikole noma ihhovisi.
Okokusebenza okungu-5-ungqimba lwe-PVC, ubulukhuni obumhlophe be-PVC phakathi, Vimbela ukusika lapho kusikwa amandla.Isebenza kahle ekusikeni umsebenzi osindayo, ehambisana nabasiki bokujikeleza kanye namabhande aqondile.Some mat a brand cutting mat black in the middle, which is not durable !
Ukusika okunembile emaceleni omabili, womabili amayintshi namagridi we-metric nama-engeli. Usayizi we-Mat: 24.8 x 18.5inches, Usayizi weGridi: 24 x 18inches, ubukhulu be-3MM, ama-engeli ahlukene 30 ° 45 ° no-90 °, Ukuphrinta komugqa kucacile, kusiza ukudweba i-Angle umugqa.
Isipho esihle sabenzi bezandla nabasebenza ngokuzilibazisa! Ukuthengisa okuqondile kwefektri, ikhwalithi enhle namanani. Kunconyelwe kakhulu umculi, abakhi, abakhi, ama-quilters, ama-engraver kanye nama-hobbyists.
Inombolo Yemodeli Yento 661A2
Uhlobo Lwesakhiwo Sokusebenza Izendlalelo ezi-5, maphakathi kungumgogodla omhlophe oyi-Hard PVC
Into Isisindo 1.35kg isiqeshana ngasinye
Ubukhulu bomkhiqizo 23.62 x 17.72 x 0.12 amayintshi / 60 x 45 x 0.3 cm
Usayizi (Okucacisiwe) A2
Uhlobo Lwezinto I-PVC
Umbala ojwayelekile Okuluhlaza okotshani, oluhlaza okwesibhakabhaka, oPinki, oMnyama, oBomvu, oPhephuli
Umata omuhle wokusika kufanele okungenani ube nezici ezilandelayo;
1. Izinto zokusetshenziswa kufanele zibe zinhle ukuze zikwazi ukuziphilisa ngokuzenzekelayo ngemuva kokusika.
2. Isendlalelo sokusika kufanele sibe sikhulu, ukuze i-blade isetshenziswe isikhathi eside, futhi umata wokusika ngokwawo unempilo ende yokusebenza.
Ukugcinwa komata wokusika;
Beka endaweni eyisicaba ngokujwayelekile; gwema ukushisa okuphezulu noma ilanga eliqondile; ungahlambi ngamakhemikhali awuketshezi amakhemikhali.
Iwaranti Yomkhiqizo: Ukuxhaswa ngemuva kokuthengiswa kwemikhiqizo iminyaka engu-1
Langaphambilini Izingqimba 5 A1 Cutting Mat, 661A1, Self ukuphulukisa Cutting mat
Olandelayo: 5 izingqimba A3 Cutting Mat, 661A3, Self ukuphulukisa Cutting mat
5 izingqimba A4 Cutting Mat, 661A4, Self ukuphulukisa Cu ...
3 izingqimba 3 Cutting Mat, 883A3, Self ephulukisa Sika ...